NVIDIA GeForce GT 630. नयाँ नाम संग पुरानो वास्तुकला
यो प्रमुख निर्माता खरीदारों भन्दा पूर्ण बिभिन्न कोण लागि बजार मा देख रहे जस्तो देखिन्छ। निस्सन्देह, यो अमेरिकी वा युरोप मा, मान्छे निर्माताको सिफारिसहरू सुन्न र तिनीहरूलाई आधारित ग्राफिक्स त्वरक चयन गर्दै सम्भव छ। रूस मा, यो एक स्वप्नलोक जस्तो देखिन्छ, र बजार मूल्य को नियम। यो थियो र घटक को चयन मा मुख्य मापदण्ड रहनेछ। त्यसैले, यो बिक्री अधिकांश बजेट खण्ड र ultrabudgetary कम्प्यूटर घटक बनेको कुनै गोप्य छ।
खरीद नै ग्राफिक्स कार्ड, कुनै कुरा यो खर्च हुन सक्छ कति, प्रयोगकर्ता आफ्नो मद्दत केही नमूना अन्तरक्रियात्मक कला सुरु आशा। सजिलै एकीकृत सम्हाल्न सक्नुहुन्छ कार्यालय समस्याहरू - अन्यथा, ग्राफिक एडेप्टरको अधिग्रहण सबै अर्थ हराउछ।
बजेट ग्राफिक्स कार्ड खेलाडीहरूलाई को आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्? बुझ्न, उदाहरण विचार NVIDIA GeForce GT 630।
ग्राफिक्स कार्ड एकदम परिचित कुन बढी ड्राई जानकारी भन्दा विज्ञापन slogans भन्दा दुवै पक्षले, बक्स खरीदारों गर्न आउँछ। भित्र बस उपकरण नै र लेजर डिस्क ड्राइभर लेखिएका छन् जो छ। कुनै अतिरिक्त तार वा एडेप्टर।
ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA GeForce GT630 पूर्ण आकारको एक विशाल HEATSINK र कूलर संग: ठोस देखिन्छ। र अन्तिम धूलो-तंग। तर ठंडा प्रणाली बोर्ड को एक ठूलो क्षेत्र। निर्माता ग्राफिक्स को उत्पादन मात्र उच्च गुणस्तरीय inductors प्रयोग, कोर फेराइट को छन् बाहिर अंक। एक capacitors दुई पटक सेवा जीवन छ।
र फलाम को embodiment कुनै दावी छ भने, आफ्नै ईन्जिनियरहरु प्रशस्त द्वारा। पहिलो अङ्क6मोडेल गर्दा, प्रयोग वास्तुकला एक GeForce 400, छ कि Femi साना प्रतिनिधिहरु मा जस्तै हो। भिडियो कार्ड प्रोसेसर को GF108 चिन्ह, र यो वास्तवमा 2010 मा विकास लागू, र त्यसपछि यो GPU मा मात्र कम अन्त मोडेल उत्पादन थिए सुझाव।
हामी भन्न सक्छौं कि आज NVIDIA GeForce GT 630 विशेषताहरु को GT 440. सोही आवृत्ति, एउटै स्मृति नियन्त्रक, ब्लक को नै नम्बरमा पूर्ण यस्तै। विस्तृत, GPU 40 एनएम लागि डिजाइन गरिएको छ। संरचना - जो आधारित ट्रांजस्टर 585 मिलियन संख्या चार ब्लक रेस्ट्राइजेसनलाई 16 को प्रदर्शन गरे। धारा प्रोसेसर 96. विनम्र हुँदैन छ। प्रोसेसर को आवृत्ति ग्राफिक्स कार्ड - 810 मेगाहर्ट्ज, सबै कमीकमजोरी लागि क्षतिपूर्ति गर्न असम्भाव्य छ।
भिडियो कार्ड NVIDIA GeForce GT 630 मर्यादा छ। ती सबै स्मृति हौं। यसको काम, कि सबै भन्दा कम मूल्य खण्ड लागि असामान्य 128-बिट बस प्रयोग गरिन्छ। माइक्रोचिप्स GDDR-5 3200 मेगाहर्ट्ज को एक आवृत्ति मा सञ्चालन। तसर्थ, को क्षमता स्मृति 51,2 जीबी / को GT 640. को अनुहार मा दाइ लागि असम्भव छ यो ग्राफिक्स कार्ड बचाउने र एक उच्च स्तर यसको प्रदर्शन प्रदर्शन, तर प्रयास आदर को उपकरण कमजोर प्रतिस्पर्धी योग्य बनाउन असम्भाव्य छ को, बराबर छ। तर यो आफ्नो GPU प्रदर्शन धेरै भद्र छ।
खैर, NVIDIA उत्पादनहरु को लाइन मा GDDR3 स्मृति संग एक मोडेल छ। कसरी सञ्चालन मा धेरै स्मृति प्रभाव, तपाईं GDDR3 कार्ड प्राप्त गरेका ती मान्छे देखि मालिक NVIDIA GeForce GT 630. प्रतिक्रिया को टिप्पणी पढ्न सक्नुहुन्छ, यी कुराहरू उत्पादन प्रशंसा छैन।
3DMark मा परीक्षण विरक्तलाग्दो - ढिलाइ यसको निकटतम प्रतियोगी को 70% मा GT 640. को अनुहार मा Unganged स्वर्ग यो अझै पनि उल्लेखनीय देखिन्छ - 50%, तर मेट्रो 2033 लगभग विरोधीहरूले मात्र 10% छोडेर equalizes छ। तथापि, FPS उच्च ग्राफिक्स सेटिङहरू मा त कम पछिल्लो प्ले सम्भव मध्यम गर्न सेटिङ परिवर्तन गरेर हो।
खेल मा, Battlefield3र एफ 1 2011 फ्रेम दर मेट्रो तुलनामा दुगुना छ, तर अझै पनि यो एक सहज खेलको लागि पर्याप्त छ: प्रति सेकेन्ड 20-24 फ्रेम को एक औसत मूल्य।
मा NVIDIA GeForce GT 630 ग्राफिक्स कार्ड खेल भाषा बारी छैन भनिन्छ। तीन-आयामी खेल मा प्रदर्शन अन्तिम पुस्ता धेरै कम पनि छैन, खेल डिजाइनर को आनन्द काम गर्ने छैन। यो कारण कम्पनी एक नयाँ उत्पादन डिजाइन गरेको छैन, कि तर पुरानो पैसा छैन भिडियो कार्ड बनाउन प्रयास पुन: नामाकरण छ। हास्यास्पद कुरा पनि 2010 मा, त्यो जारी थियो GT 440, यो आफ्नो लाइन को सबै भन्दा कम दर संग सस्ता समाधान छलफल भएको थियो छ। बस GDDR-5 कार्ड को पुरानो वास्तुकला मा नयाँ स्तर जित्न सक्षम थिएन तपाईंको स्मृति घुसाउनुहोस्। पनि ओभरक्लकिङ आरामदायक खेल FPS लागि आवश्यक सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दैन।
NVIDIA GeForce GT 630 गैर-खेल प्रणाली, एकीकृत अभाव जो ग्राफिक्स कोर लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ। र यो मामला मा, तपाईं पनि व्याख्या गर्न सक्दैन धेरै लाभ शुल्क: निष्क्रिय मा स्वचालित आवृत्ति कमी संग कम बिजुली खपत; उच्च गुणस्तर ठंडा प्रणाली शान्त सञ्चालन धन्यवाद। उपयुक्त ग्राफिक्स त्वरक र उत्पादन रमाइलो गर्न चाहने, खेल को एक वा बढी पुस्तामा छुटेका छन् जो खेलाडीहरूको लागि, केही वर्ष पहिले जारी।
र अझै, तपाईं को लागि देख रहे भने एक सस्तो ग्राफिक्स कार्ड, मूल्य जो अधिक छैन पनि कम गुणस्तर सेटिङ एउटा खेल हुन सक्दैन लागि GT 630 गर्न सिफारिस गर्न $ 70। भिडियो कार्ड कम्पनी AMD मा राम्रो: जस्तै, HD 6670 र 6750, आज पनि, प्रदर्शन को एक सभ्य स्तर देखाउँछ।
किबोर्डमा विन कुञ्जी आवश्यक छ के पत्ता
मुद्रक लागि रंग कस्तो छ
कसरी आफ्नो गन्तव्य आधारित एन्ड्रोइड ट्याबलेट ओएस चयन गर्न
MFP सैमसंग SCX-3405: प्रयोगकर्ता पुस्तिका, सुविधा र समीक्षा
आन्तरिक अङ्गहरू, उपस्थिति, संचार, सम्बन्ध: जनावर र मानिसहरूलाई बीच मतभेद र समानता
पोस्ता संग बन्स कसरी Bake गर्न
क्षेत्रमा फोटोहरू: कुन विचारहरू लागू गर्न सकिन्छ?
नियमहरूमा को 11, कसरी मन को शान्ति हासिल गर्न
Multivarka "पानासोनिक" मा Borsch: नुस्खा
"Fluoxetine" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
थकान, कमजोरी, डराएको - एक रोग को संकेत?
"Maynkraft" मा पानाहरू कसरी बनाउने र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने?